केवल कारैमा - Youtube वाच - साप्ताहिक
कृष्ण भट्टराई र मीना निरौलाको आवाज रहेको ‘केबल कारैमा’ बोलको गीतको भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ । गायक भट्टराईले यसअघि ‘कुल कुल’ बोलको गीत दर्शक–श्रोतामाँझ ल्याएका थिए ।
बुधबार युट्युबबाट सार्बजनिक यो गीतमा मदन प्रधानको शब्द रचना, विश्व अधिकारीको संगीत रचनाकार मदन प्रधानको एकल एल्बम ‘सपना सिर्जना’ मा समाबेश छ । उक्त एल्बममा चार गीत अटाएका छन् । कृष्ण भट्टराईको स्वरमा दुई वटा र अञ्जु पन्तको स्वरमा एक गीत रहेको छ । अर्को एक गायकको स्वर रेकर्ड गर्न बाँकी रहेको छ ।
उक्त एल्बम केही समयपछि सार्बजनिक गरिने गीतकार प्रधानले जानकारी गराए ।
इन्डियाको रियालिटी शो ‘डान्स प्लस’ मा फस्ट रनरअप बनेका सुजन मार्पा तामाङ र बुगी बुगीकी बिजेता कविता नेपालीले अभिनय गरेको भिडियोलाई राजिब समरले निर्देशन गरेका हुन् । ज्ञानेन्द्र शर्माले छाया“कन गरेको भिडियोलाई विकाश ज्ञवालीले सम्पादन गरेका छन् । सुजन मार्पा तामाङका कोरियोग्राफी रहेको छ ।
यो गीत टिकटक कम्पिटेसन पनि गरिने भएको छ । टिकटक कम्पिटेसनमा बिजेताले नगद ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैंया नगद प्राप्त गर्नेछन ।
के टेलिभिजन विस्थापित हुँदैछ ?
पिउनका लागि सबैभन्दा राम्रो बहाना के हुन सक्छ ?
तपाईं आफ्नो कुन सहकर्मीको के कुरामा ईष्र्या गर्नुहुन्छ ?
एवार्ड नपाउँदा किन चित्त दुखाइन्छ ?
काठमाडौंको सडकजाम, के गरे होला कम ?
स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्यकोषको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ ?
इन्दिराको नाचौँ मितिनीमा सम्झनाको छमछमी श्रावण ३, २०७६
क्रिष्टिना श्रेष्ठको स्वरमा नेपालकी छोरी श्रावण २, २०७६
तिम्ल्याहा डाक्टरका बाबु शिवको तीज गीत ‘क्या दामी’ श्रावण १, २०७६
शिल्पा पोख्रेल भन्छिन्– उनकै कुरा हुन्छ श्रावण १, २०७६
मेलिना र कमको एनी प्रोब्लम असार ३०, २०७६
क्रिकेटरको गीत असार ३०, २०७६
धिताल चिरिच्याट्टको देशको अवस्था चित्रण गरिएको गीत असार २९, २०७६
‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को टिजर सार्वजनिक असार २३, २०७६
सुमित पाठकको समाचार सार्वजनिक असार २३, २०७६
यस्तो छ 'कबड्डी कबड्डी कबड्डी' को टिजर असार २२, २०७६